पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई सहित १२ जना कांग्रेसमा प्रवेश — donnews.com
पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई सहित १२ जना कांग्रेसमा प्रवेश
पोखरा । पोखराका पर्यटन व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी एवं पूर्वउपमेयर गणेशबहादुर भट्टराईसहितको १२ जनाको टोली नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाएका पर्यटन व्यवसायीहरु एक साथ कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पूर्वउपमेयर रहेका भट्टराईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध भएपनि पछिल्लो समय उनी त्यति सक्रिय भने थिएनन् । खेलाडी एवं पर्यटन व्यवसायी भट्टराईसँगै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, जीवन भट्टराई, धर्मेन्द्रकुमार बाटाजु, अशोकुमार भण्डारी, ई. विकास भट्टराई, ई. विशेष भट्टराई, जयराम तिमिल्सिना, सुनिलबहादुर भट्टराई, अमित थापा, सरोज भट्टराई र आशिष भट्टराई लगाएतलाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।